China Hoodie fekitori uye vagadziri | Chiono
Iyi hoodi inogadziriswa ine yakanyanya kuwanda, boxy kukwana uye hombe-hombe homwe homwe, senge yekare-chikoro juzi. Vana, vechidiki, uye vakuru vanozokoshesa yakapfava inodziya yemukati uye kubvarura mutsipa chitupa. Iyo polyester donje musanganiswa zvinoreva kuti ivo vashoma mukana wekudzikira.
1.Iyi hood inogadziriswa ine yakanyanya kuwanda, boxy fit uye yakawedzera-hombe homwe muhomwe, senge yekare-chikoro juzi. Vana, vechidiki, uye vakuru vanozokoshesa yakapfava inodziya yemukati uye kubvarura mutsipa chitupa. Iyo polyester donje musanganiswa zvinoreva kuti ivo vashoma mukana wekudzikira.
2.Nemavara anopfuura makumi maviri anowanikwa, aya mapurlover hoodies akagadzirira boka rako kana chiitiko chakakosha. Ivo vanouya neakakwira-anooneka akasimbiswa mavara, futi, izvo zvinoita kuti vakwanise kugadzirira yako inomhanya kirabhu kana yekunze basa crew.Zvakare, zvakagadziriswa zvinogona kuitwa, iwe unongofanirwa kupa yako yaunofarira pantone kodhi kodhi.
masendimita Saizi S M L XL 2XL 3XL 4XL
Kureba 26.5 27.5 28.5 29.5 30 30.5 31
upamhi 20 22 24 26 28 30 32
Pashure: tsika kudhinda isina chinhu polyester inomhanya t shirt logo
Zvadaro: Wholesale polyester spandex mens mitambo yekutamba yakatambanudza Workout ziya ziya nebhurugwa rerutivi
Yakagadziriswa Yakadhindwa Hoodies